Space, kubatana uye manejimendi mhinduro yekuvandudza software | Linux Vakapindwa muropa
Space yakamisikidzwa seyakawedzera yekudyidzana mhinduro uye zvese-mu-imwe zvekuvandudza software, manejimendi manejimendi, zvikwata, uye kutaurirana.
Space inogadzirwa neJetBrains uye inomira pakubvumidza iwe kubata ese ekubatirana uye kusimudzira maitiro. Space inovavarira kubatanidza maturusi neruzivo mukati mesangano, kuitira kusimudzira kushanda pamwe chete pakati pezvikwata nepasirese mukambani yese.
Nekupa chikuva pane izvo nhengo dzechikwata dzinogona kutaurirana, kugovana ruzivo uye kushandira pamwe pazvirongwa, Space inoputsa masiros mukati memasangano.
Kunyangwe iri software yekuvandudza, dhizaini, manejimendi, kana chero imwe mhando yebasa, Space inogonesa munhu wese kugadzirisa kwavo kugadzirwa uye kushandisa zvakanyanya kugona kwavo.
Space inosanganisira zvese zvinodikanwa maturusi kutsigira mapaipi ekuvandudza software ehukuru hwese, kusanganisira zvinotevera:
Sosi yekudzora kubata (Git).
Kodhi yekuongorora pamwe nekubatanidza zvikumbiro uye zvemhando yepamusoro maitiro.
Otomatiki mabasa ekuvaka uye kuendesa zvinoshandiswa.
Zvirongwa zveProjeki manejimendi: ekuronga yekutarisa, yekutevera tikiti uye ekuona emadhodhi.
Kuisa zvinyorwa uye midziyo yekutsikisa zvigadzirwa.
Dhairekitori remapoka anotarisira, pakati pezvimwe zvinhu, chimiro chesangano rekambani, mvumo, kusavapo uye dzakasiyana nzvimbo dzenzvimbo.
Kutaurirana uye ruzivo rwekuchinjana maturusi senge machats, mablog uye zvinyorwa.
Manejimendi emisangano, ako wega ajenda uye rondedzero yemabasa ekutarisira basa.
Uye pamusoro pezvose, kugonesa kushanda pamwe, Space inosanganisa zvinhu izvi nesangano uye ekutaurirana maturusi.
Nekuunganidza yakawanda data mune imwechete chishandiso, Space inopa mikana yakawanda, sekubatanidza marudzi ese ezaziso mukuyerera kumwe chete kana kudzikisira kukanganisa kana iwe wakabatikana uye semuenzaniso kudzivirira kupa mabasa kunhengo dzeboka dzisipo.
JetBrains anotenda kuti kusanganiswa kwekushanda yeseti yakakwana yezvishandiso mukushandisa kumwe chete kunogona kudzora mari yekutanga neyekuchengetedzapamwe nemitengo isina kunangana nekuderedza zvinodiwa pakudzidziswa, nemapoka ese ari musangano achishandisa mhinduro imwechete.
Muna 2020, JetBrains, semamiriyoni emamwe makambani kutenderera pasirese, aifanirwa kuchinjika nekuita teleworking. Kuve neiyo imwe chete, yakasanganiswa nharaunda yekushandira pamwe yakaratidza kuve mukana wakakura kuita izvi nekukurumidza.
Space yakagadzirirwa kushanduka sezvo sangano rinokura. Uye zvakare, mhinduro yacho inoshanda nenzira yekuzvishandira, iyo inobatsira kutanga, nzvimbo inoenderana nekushanduka kwemapoka ako nesangano rako, kuti vagare vachikwanisa kugutsa zvavanoda.
JetBrains inoona kuti sangano rega rega rakasarudzika Sepuratifomu inokwenenzverwa, Space inogona kutsigira akasiyana siyana mafashama ekufamba uye bhizinesi maitiro. Izvi zvinogadzira mikana mizhinji yevanoshanda navo, vanogona kusangana nezvinodiwa nevatengi vavo nekuvabatsira kuwana zvakanakisa kubva muSpace. JetBrains yakagadzira matatu mapurogiramu ekubatana ayo anofukidza iwo makuru ekudyidzana mamodheru: kudyidzana kudyidzana, kubatana kwebasa, uye kudyidzana kwetekinoroji
Nekuburitswa pachena uku, muparidzi akaisa pfungwa pakutsigira kufambiswa kwemabasa kwezvikwata zvekuvandudza software.
JetBrains inoronga kutsigira kuwanda kwekufambidzana kwemabasa yemhando dzakasiyana dzezvikwata, kusanganisira dhizaini, kushambadzira, kutengesa, zviwanikwa zvevanhu, uye zviri pamutemo. Kushanda pamwe pamagwaro kwakakosha kumatimu mazhinji. Naizvozvo, JetBrains inoronga kutsigira, pakati pezvimwe zvinhu, maitiro ekugadzira uye kugadzirisa maratidziro, zvinoda kushanda, mishandirapamwe, mamepu emigwagwa, zvibvumirano zvepamutemo neongororo dzepamutemo.
Iyo nzira yemigwagwa ye2021 inosanganisira:
Iyo ye-pane-vhezheni vhezheni uye yekufambisa nzira kubva kune iro gore vhezheni kuenda kune-pane-chivakwa vhezheni yeSpace. Saka iwe unogona kutanga kuyedza iyo vhezheni vhezheni yeSpace izvozvi uye zvisina musono shanduko kune yemuno vhezheni gare gare.
Localization, kuti Space inotaura mutauro wako.
Vhidhiyo mafoni, mukati uye kuburikidza nekubatanidzwa nezvishandiso zvekunze.
Natsiridza, gadzirisa uye gonesa zviripo zviripo zveSpace.
Dzimwe sarudzo dzekutama nekubatanidzwa, semuenzaniso, makarenda akabatanidzwa neGoogle
Karenda uye Outlook / Office365.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Space, kubatana uye manejimendi mhinduro yekuvandudza software